दरबार होटल र रेस्टुरेन्ट | Hultsfred मा जानुहोस्
दरबार होटल र रेस्टुरेन्ट
हेम » आवास » होटल » दरबार होटल र रेस्टुरेन्ट
यो आरामदायक, परिवारद्वारा सञ्चालित होटल Småland मा Hultsfred ट्रेन स्टेशन बाट केवल meters० मिटर पर छ। होटलबाट तपाईंको नजिकैको दृश्य हिलिन्जेनको दृश्य छ। प्यालेस होटलमा प्रत्येक व्यक्तिगत रूपमा सजाइएको कोठामा फ्ल्याट स्क्रिन टिभी र एक निजी बाथरूम छ। केही कोठामा कार्य डेस्क पनि हुन्छ।
प्यालेस होटलले धुलाई र इस्त्री सेवाहरू प्रदान गर्दछ। होटेलमा नि: शुल्क सार्वजनिक पार्किंग उपलब्ध छ।
नजिकै एक जंगल छ जहाँ तपाईं हाइक गर्न सक्नुहुन्छ। ताल पौडी, माछा मार्ने र डु boat्गाका लागि उपयुक्त छ। एस्ट्रिड लिन्डग्रेनको वर्ल्ड थिम पार्क २ 25 मिनेट ड्राइभ टाढा छ।
स्टेशनहरु बाट २, 577 30 हल्ट्सफ्रेड, स्वीडेन
//1 एक महिना अघि
अत्यन्तै घमण्डी र रुचि नभएको वेटर। पर्खाइ को 20 मिनेट पछि, उहाँ टेबलमा पुग्न कोसिस गर्नुहुन्छ। जब हामी उसको प्रश्नको जवाफ दिन्छौं, कि हामी अझै विशेष गरी सन्तुष्ट छैनौं, उसले जवाफ दिन्छ कि तब हामी कहीं जान सक्छौं। हामीले एउटा टेबल अर्डर गरेका थियौं र हाम्रो साथमा एक व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता थियो र कुनै मद्दत छैन वा बाहिर। अन्यत्र जानुहोस् यदि तपाइँ राम्रोसँग खान चाहानुहुन्छ, उचित मूल्य र राम्रो सेवा संग। त्यहाँ Hultsfred मा अधिक होटलहरु छन्।
गत हप्तामा //5
सुपर सुपर राम्रो धेरै राम्रो स्टाफ राम्रो कोठा
//3 एक महिना अघि
राम्रो खाना, तर अब कुनै सेवा। अलि अस्वस्थ वातावरण। कुनै वाह भावना छैन।
बिल्कुल आश्चर्यजनक कोठा र खाना! Hultsfred को लागी सडक लिने लायक!
सुन्दर वातावरण, राम्रो खाना र आश्चर्यजनक मैत्री र सहयोगी स्टाफ। सामान्य बाहिर सेवा। केहि असम्भव छैन, दुई तनावग्रस्त विवाहित पाहुनाहरूलाई जम्प फिक्स गर्न मद्दत नगरी पनि शनिबार बिहान डिस्चार्ज गरिएको कारको ब्याट्री हुन्छ। Hultsfred को हृदय मा यो मणि सम्झना छैन! निश्चित रूपमा फिर्ता हुनेछ जब हामीसँग सडक फेरि फिर्ता हुनेछ।